एक सफल नारी करिश्मा मानन्धरको यात्रा ; चलचित्रदेखी राजनितिसम्म (नारी दिवस विशेष) – Complete Nepali News Portal
एक सफल नारी करिश्मा मानन्धरको यात्रा ; चलचित्रदेखी राजनितिसम्म (नारी दिवस विशेष)
March 8, 2017	2,204 Views
जापान , एच.बी ताम्राकार
फागुन २५ । नयॉं शक्ति पार्टीकि नेत्रि तथा चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरले १०७औ अन्तराष्ट्रीय महिला दिवसको अवसरमा सवैलाई शुभकामना दिएकी छिन ।
करिश्मा मानन्धर को हुन ?
करिश्मा मानन्धर (केसी) (जन्म १९७१, ललितपुरमा) नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एक चर्चित अभिनेत्री र तथा चलचित्र र्निमात्री हुन्।उनी नेपाली रजतपटमा सबैभन्दा सुन्दर नायिकाका रूपमा समेत चिनिन्छिन । करिश्मा अहिले फिल्म निर्माणमा समेत सक्रिय छिन् । उनको पहिलो चलचित्र वि.सं. २०४२ सालमा बनेको सन्तान हो । त्यसबेला उनी मात्र १४ वर्षकी थिइन् । त्यस फिल्ममा उनले भुवन केसीसँग काम गरेकी थिइन् ।
कोसँग विवाह गरिन ?
चलचित्र क्षत्रबारे के भन्छिन ?
सुन्दरी करिश्मालाई धेरैले ‘के राज हो सधैं सुन्दर देखिनुको’ भनेर सोध्छन्। उनी आफूलाई मार्न हैन हरदम ताजा र जीवित राख्ने कोशिशमा रहने जवाफ दिन्छिन्। “खासगरी, महिलाका लागि खुशी र स्वस्थ रहनु अनिवार्य पनि छ”, करिश्मा भन्छिन्, “आफू दुःखी भएर अरूलाई खुशी पार्न सकिंदैन।” मानिसले शरीर प्रयोग गरेर धेरै थोक कमाउने हुनाले जीवन नै धान्ने शरीरलाई माया गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। स्वस्थ, सुन्दरता, परिवार र कामलाई सँगै लिएर हिंडेकीले आफू आम नेपालीको हिरोइन हुनसकेको उनको भनाइ छ। नेपाली सिनेमाको कमजोरीका जानकार हिरोइन करिश्मा नायिकाहरूको जथाभावीले यो क्षेत्र बद्नाम छ भन्ने भनाइको कडा प्रतिवाद गर्छिन्। उनी भन्छिन्, “यो क्षेत्रको मर्यादाको सीमा र माया यसलाई नै जीवन बनाएको हामीलाई भन्दा बढी अरूलाई हुनु अनौठो हो।”
नयॉं शक्तिमा प्रवेशबारे करिश्मा मानन्धर के भन्छिन ?
नयाँ शक्तिमा आवद्ध हुनुपूर्व मैले तीन दिनसम्म आफैसँग अन्तरक्रिया गरेँ ।के म कलाकार भएर राजनीति गर्नै नहुने हो त ? राजनीतिमा लाग्दा मेरो हजारौं दर्शक गुमाउने त होइन ? किनकी, राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो, भन्ने छाप समाजमा परेको छ ।
भगवानले हरेक मानिसलाई ठीक र बेठीक छुट्याउन सक्ने विवेक दिएका छन् । त्यो आफैंले थाहा पाउन सक्नुपर्छ । राजनीति गर्ने वा नगर्ने ? यसबारेमा मेरो अन्तरआत्ममा संघर्ष चलिरहेको थियो । त्यो बेला म कसैसँग भेट्दा पनि भेटिन, कुनै कुरामा छलफल पनि गरिन् ।मेरो जीवनको पहिलो निर्णय हो, जुन परिवारलाई बताइन । म मेरो विचारलाई डगमगाउन दिन चाहान्थ्येँ । राजनीतिमा लाग्ने निर्णय आफ्न्तलाई सुनाएँ भने विचार डगमगाउन सक्छ भन्ने लाग्यो, कसैलाई जानकारी नै दिइनँ ।कलाकारिता क्षेत्रमा आफ्नो स्थान बनाएको मान्छे राजनीतिक बाटो कस्तो होला भन्ने आत्मसंघर्षकै बिचमा मेरा तीन दिन एक्लै बिते ।